Shirarkii Gudiyada Amniga Oo Si Habsami Leh U Socda. - Cakaara News
Shirarkii Gudiyada Amniga Oo Si Habsami Leh U Socda.
Jigjiga(CN) Axad-31-August-2014, Sida aad wararkayagii hore kala socoteen CakaaraNews waxaa jirtay in labadii maalmood ee talaadada iyo arbacada ee isla todobaadkani ay kadhaceen xarunta Deegaanka ee Jigjiga shirarkii ay lahaayeen gudiyada amniga ee DDSI kuwaas oo ay ku dhanaayeen gabi ahaan Security Councilka deegaanka oo uu hogaaminayay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdi kasocday heer federaal gaar ahaan laamaha amniga ee ciidanka qaranka iyo booliska federaalka Itoobiya.
Shirkan oo ay kamid ahaayeen gudiyadii amniga ee maamulada 9-ka gobol ee deegaanka ayaa la isla qiimeeyay qorshihii 2006-da ee Nabadgalyada, xidhiidhka dadwaynaha, adeeg bixinta ilaa heer tuulo, saraynta sharciga iyo horumarka. Maamulada gobolada oo dhankooda ka warbixiyay heerka nabadgalyada ayaa soo bandhigay in uu deegaanku marayo heer sare oo abid hada kahor uusan soo marin haday tahay xasiloonida iyo haday tahay horumarkaba. Xaalada nabadiidka ayaa lasoo bandhigay in guud ahaanba nabadiidkii lasoo afjaray dhanka hogaaminta, unugyada, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
Waxaa aad loo soo dhaweeyay dadaalada badan ee ay ciidanka qaranka iyo federaal boolisku kagaysteen deegaanka gaar ahaan dhinacyada nabadgalayada, hirgalinta mashaariicaha waawayn sida jidadka, isgaadhsiinta iyo ladagaalanka kontarabaanka. Ciidamada gaarka ah ee Liyuu poliska DDSI oo iyagu kaalin libaax ka qaatay afjarida nabadiidka islamarkaana haatan u guntaday dhinacyada horumarka ayaa sidoo kale sanadkan 2006-da lasoo bandhigay guulihii ay kasoo hoyiyeen hawlihii nabadgalyada kuwaas oo ay kamid ahaayeen dagaaladii ay cashirka ugu dhigeen weerarkii gardarada ahaa ee ay Alqushaash kusoo qaaday tuulada Aato ee deegaanka soomaalida Itoobiya, halkaas oo ay ciidamada Liyuu Polisku ku qabteen 10 magaalooyin oo ay kamid ahaayeen saldhigyadii waawaynaa Alqushaash ee Lagalaay iyo Garaswayne islamarkaana lagu dilay in kabadan 150 alqushaash ah sir badana lafashiliyay.
Guud ahaan shirkaas security councilka ayaa lacadeeyay in deegaanku gaadhay halkii ugu saraysay abid horumarka sida biyaha, jidadka, waxbarashada, dib-u-dajinta, shaqo abuurka, xidhiihka dadwaynaha dal iyo dibad, iyo saraynta sharciga. Waxaana la xaqiijiyay in afartii sano ee danbaysay ay deegaanka ka hirgashay dawladnimo iyo saraynta sharciga taasoo si xawli ah u wada hawlaha kala duwan ee horumarka. Sidoo kale waxaa lacadeeyay in lasii laba jibaaro dadaalkan horumarka iyo nabadgalyada oo haba yaraatee aysan dib u noqon karin, iyadoo hada shacabku kadharagsanyahay barobagaandada nabadiidka oo kadhigan micnaheedu dibi baa sac dhalay ee aan lahayn meel loogu soo gabado aadna diciiifka u ah. Shirarkan oo madaxafiiseedyada iyo shaqaalaha deegaankana lalayeeshay ayaa la islaqaatay in la dardar galiyo mashaariicaha 2007-da laguna gabagabeeyo rubaca 1aad ilaa ka 2aad maadaama ay sanadkan hawlo doorashooyin jiraan.
Hadaba shirkaasi kadhacay xarunta jigjiga ayaa la islaqaatay in hoos loo dhaadhiciyo qorshayaashii kasoo baxay shirka lana gaadhsiiyo gobolada iyo degmooyinka. Waxaana gobolada iyo degmooyinka deegaanka kadhacaya shirarkaasi security councilka oo ay haatan gobolada iyo degmooyinka qaar kood ka qabsoomeen iyadoo ay qaar kalena wali ka socdaan.
Gundhiga iyo gunaanadka shirarka security councilka ayaa ah inuu guud ahaan deegaanka si habsami leh uga socdo islamarkaana xoojinayo qorshayaasha nabadgalyada iyo horumarka ee 2007-da T.I. iyadoo deegaanka ay ka go'antahay sii xoojinta hawlaha horumarka ee aan lasoo koobi karin tusaale yarna looga soo qaadan karo barnaamijkii caafimaadka ee indhaha loogu fiiqayay shacab badan oo kusugan gobolada deegaanka oo arag la'aan ahaa kadib dadaal ay xukuumada iyo muwaadiniin aqoonteeda leh ku caawiyeen uu Ilaahay arag ku siiyay.